Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Sleeping Question မအိပ်ဘဲနေ အသက်ရှည်မလား
Sleeping Question မအိပ်ဘဲနေ အသက်ရှည်မလား
ကျွန်တော်အသက်က ၃၂ပါအိမ်ထောင်မရှိလူပျိုပါ။ ညအိပ်ရင် ၅နာရီထက်ပိုအိပ်မရပါ။ ည ၁၁နာရီအိပ်ပျော်ရင် မနက် ၄နာရီကျော်ကျော်နိုးပါတယ်။ ပြန်အိပ်မရပါဘူး။ ၆နာရီနဲ့ ၇နာရီကြားဆို အိပ်ရေးမ၀သလို ငြီးစိစိခံစားရပါတယ်။ အဲ့နောက်ကျပုံမှန်ပါပဲ။ စောစောအိပ်ရင်စောစောနိုးပြီး နောက်ကျရင်လည်း ၅နာရီခွဲထပ်ပိုအိပ်မရပါဘူး။ လူတယောက်ရဲ့အိပ်ချိန်က ဘယ်လောက်ဆိုလုံလောက်ပါသလည်းဆရာ။ အဝေးပြေးကုန်ကားမောင်းတာပါဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. Insomnia အိပ်မရခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/insomnia.html
2. Melatonin မယ်လာတိုနင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/melatonin.html
3. Sleeping မအိပ်ဘဲနေ အသက်မရှည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sleeping.html
4. Pregnancy and Sleeping pills ကိုယ်ဝန်နဲ့ အိပ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-and-sleeping-pills.html
5. Sleeping pills အိပ်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sleeping-pills.html
6. Sleeping positions during pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ဘယ်လိုအိပ်သင့်သလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/sleeping-positions-during-pregnancy.html